गैरेको रोइला गीत 'वैमानीको खलक' सार्वजनिक (भिडियोसहित)
पाल्पा : पाल्पाली युवा सर्जक तथा गायक सुमन गैरेको आवाजमा नयाँ रोइला (ख्याली) ‘बैमानीको खलक’ गीत बजारमा आएको छ । बैमानीको खलक गीतमा गैरेलाई पाल्पाली नव गायिका सीमा विश्वकर्माले साथ दिएकी छन् ।
गीतको भिडियोमा अर्जुन न्यौपाने, शिखा विश्वकर्मा लगायतको अभिनय देख्न सकिन्छ । गोकुल सारुको कोरियोग्राफी, पुरुषोत्तम गैरेको निर्देशन रहेको भिडियोलाई सन्तोष बस्यालले छायांकन गरेका छन् ।
गायक सुमन गैरेका यसअघि थुप्रै लोकप्रिय गीतहरु बजारमा आइसकेका छन् । लामो समयपछि गायक गैरेले पाल्पामा मौलिक कला र संस्कृतीको रुपमा लिइने रोइला गीत दर्शक स्रोतामाझ लिएर आएको र उक्त गीतले नेपालीहरुको मन जित्न सक्ने गैरेले मध्याहसँगको कुराकानीमा बताए । गीतको भिडियो पुर्षोतम गैरे युट्युबमार्फत बजारमा ल्याइएको छ ।
धितालले ‘माया चोखो छ २’ ल्याउने
काठमाडौं : कलाकारितामा रुची नहुने सायदै होलान् । पछिल्लो समय निर्माण भएका भिडियोहरुमा नयाँ–नयाँ कलाकारको उपस्थिति देखिन्छ । यसै क्रममा ‘माया चोखो छ’ गीतबाट अभिनयको क्षेत्रमा स्माइल धितालको डेब्यु भएको छ । सल्यानको डाडागाउँ गा.पा. ७ का स्थानीय वासिन्दा स्माइल धिताल नामबाट परिचित भएका धितालको वास्तविक नाम भने भिम धिताल हो ।
उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौं प्रवेश गरेका धितालले इन्जिनियरिङको अध्ययन गर्नका लागि धितालले नाम निकाल्न नसकेपछि त्रिचन्द्र कलेजमा आईएससी, बीएससी र मास्टर लेवलको अध्ययन किर्तिपुरबाट पूरा गरेपश्चात कोटेश्वरस्थित चिल्ड्रेन सेकेन्डरी स्कुलमा तीन वर्षदेखि शिक्षा पेशामा संलग्न छन् । धितालले वेलकम कोलोनी र वेलकम वि.पि. कृषि फर्मका प्रोप्राईटर समेत रहेका धिताल सानै उमेरदेखि नेपाली गीत संगीतप्रति रुची भएपनि समयले साथ नदिएको र अहिले आएर त्यो चाहना पूरा भएकोमा आफु खुशी रहेको बताउँछन् ।
नेपाली गीत, संगीतलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ ‘माया चोखो छ’ बोलको गीतबाट अभिनय यात्रा शुरु गरेको बताउने धिताल अभिनित गीतमा चर्चित लोकदोहोरी गायक बिमल डाँगीको लय र महेन्द्र बिस्वकर्माको शब्दमा रहेको छ । गीतमा चर्चित लोक दोहोरी गायक पुश्कल शर्मा र बिष्णु माया पौडेलको स्वर रहेको छ ।
दिपक गीरीको छायांकन रहेको गीतमा नेपाली गीत, संगीतका सफल महिला निर्देशक बबिता श्रेष्ठको निर्देशन रहेको छ । आरब प्रोडक्सनले दृश्य निर्माण गरेको उक्त भिडियोमा स्माईल धिताल र बिष्णुमाया पौडेलको अभिनय रहेको छ ।
भविष्यमा गीत, संगीत र अभिनयमा निरन्तर लागिरहने सोच बनाएका कलाकार धितालले नयाँ कलाकारलाई सञ्चारका मिडियाले पनि साथ नदिने गरेकोमा चिन्ता ब्यक्त गरे । उनी अभिनित म्युजिक भिडियो प्रियसी म्युजिक प्रा.लि.को युट्युव च्यानलमार्फत सार्वजनिक भएको छ भने आगामी बैशाख १ गते नयाँ वर्ष २०७८ को शुभकामनासहित ‘माया चोखो छ २’ सार्वजनिक गर्ने कार्यको अन्तिम तयारी भैरहेको धितालले जानकारी गराए ।
‘मेला महोत्सवले कलाकार र स्थानीय दुबैलाई फाइदा हुन्छ’
नेपाल बहुभाषा, बहुसँस्कृति मौलिक परम्पराले भरिएको मुलुकमा मानिसहरुका आ–आफ्नो साँस्कृतिक पहिचान छ । नजिकबाट अध्ययन गर्दा पहिले देखिनै मानिसहरु हिउँदे सिजन जुन जाडोयाम जाँदै गर्दा आफू आफूमा भेटघाट सुख–दुःख, पीडा बाँड्ने आफुमा भाईचाराको व्यवहार गर्ने जस्ता कृयाकलापलाई एक रमणीय स्थान मठ मन्दिर र सबैलाई पाएक पर्ने स्थानलाई कुनै मिति प्रचलित थियो ।
मानिसहरु वर्ष भरीबाट त्यहाँ जाने आफन्त इष्टमित्रलाई भेटघाट गर्ने, र भलाकुसारी गर्ने चौतारीका रुपमा लिने गरिन्थ्यो, जुनबेला अहिलेको जस्तो आधुनिकता नेट ईन्टरने, मोबाईल जस्ता प्रविधि थिएन र साच्चै भन्नुपर्दा यस्तै भेलालाई नै मानिसहरुले खबर समाचार र व्यवहारिक नाता, सम्बन्ध जोडन् र सन्चो बिसन्चो आदान प्रदान गर्ने अवसरको रुपमा पनि मानिन्थ्यो ।
मानिसहरुले आफैं बनाएका विभिन्न परिकार, सिप मुलक सामाग्री कृषिजन्य वस्तुहरु प्रदर्शन गर्ने व्यापार, व्यवासयहरु गर्ने र खानि, खुवाउने गरिन्थ्यो जसलाई मानिसहरुले त्यस्ता भेलालाई एक व्यपारिक केन्द्रको रुपमा पनि लिने गरेको पाइन्थ्यो । भौगोलिक दृष्टिकोणले अत्यन्त कठिनाई स्थितिलाई मध्येनजर गरि नेपालमा पहिलेबाट नै देशै भरी यस्ता किसिमका मजघट र भेला गरि मनाउने गरिन्थ्यो । अहिले पनि हाटबजार, महोत्सवको प्रचलन जिवितै छ । विस्तारै, विस्तारै समाजको विकासको परिवर्तनसंगै यस्ता भेलाहरु परिस्कृत हुँदै गए । धैरे भन्दा धैरे मानिसहरुका जमघट गराउने आन्तरिक तथा वाह्य मानिसहरुलाई आकर्षण गरी त्यहाँको पहिचानलाई देश तथा विदेशसम्म पुर्‍याउने हेतुले अझै मनोरञ्जनात्मक गराउन मानिसहरुलाई आकर्षित गर्नको लागि राष्ट्रिय स्तरका ख्याति प्राप्त कलाकारहरुलाई समेत त्यस्तो अबसरमा उभ्याउने गरेको पाइन्छ । यस्ता कार्यक्रमले कलाकार र स्थानीय दुबैपक्षलाई पाईदा पुग्ने गर्छ ।
प्रायः दशै, तिहार पछि जाडोयामसँगै शुरु हुने यस्ता कार्यक्रम यो वर्ष ‘कोभिड १९’ले गर्दा लगभग ठप्प नै भए । नायक शीतल केसीले यति सिनेमामा काम गर्यो, यो त्योको बेलिबिस्तार लगाइरहनु पर्दैन नेपाली सिनेमाका दर्शकलाई उनको नाम नै काफि होला भन्ने लागेर सिधै मुलबिषय मा प्रवेश गरे । चलचित्रमामात्र नभएर स्टेज कार्यक्रममा समेत जीवन्त अभिनयका कारण ख्याति कमाएका सदाबहार एक्सन नायक शीतल केसीले मध्यान्ह दैनिकका लागि सानु श्रेष्ठसँग हाटबजार, महोत्सवको समय सान्दर्भिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीः
यो वर्ष मेला, महोत्सवमा कत्तिको हिँडियो त ?
कता हिंड्नु नि । पहिले, पहिले यस्ता मेला, महोत्सव आफ्नो समुदायमा र सिमित समय र सिमित भूगोलमा मनाउने गरिन्थ्यो जसले आ–आफ्नो पहिचान, साँस्कृतिक पहिचान मान्ने गरिएको पाइन्थ्यो । अहिले विस्तारै विस्तारै यस्ता कृयाकलापहरु मेला महोत्सवहरु आधुनिकतिर बढ्दै गए । जुन मानिसहरुलाई आफ्नो संस्कृति पहिचानको प्रवद्र्धनका लागि ठूलो थलो बन्न थाल्यो, जहाँ आफ्नो संस्कृति, सीप, कृषि उत्पादनको पहिचान र भूगोल सुहाउदो पर्यटनको आन्तरिक, वाह्य प्रवद्र्धन गरिको पाइन्छ । जसबाट मानिसहरुको आ–आफ्नो कला संस्कृति, सीप, प्रवद्र्धन गर्ने र भूगोलका सहि पहिचान गरी आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकको संभावना दर्शाइन्छ र राज्यले पनि यस्ता भेला महोत्सवबाट व्यापार, व्यवसायबाट भरपूर लाभ उठाउने गथ्र्यो । राज्यस्तरबाट पनि ठूला, ठूला लागानि गरी भेला महसत्व गर्ने गरेको थियो । तर, यस वर्षको यस्ता मेला महोत्सव ‘कोभिड १९’को कारण आयोजना हुन सकिरहेको छैन् भने राज्यले पनि ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।
कोरोनाको कहरबाट गुज्रिएको अवस्थामा फेरि पहिलेको स्थिति जस्तै भेला, महोत्सव हुन्छ त ?
कोरोनाको जटिल स्थितिबाट भेला, महोत्सव हुनेमा शंका लाग्छ किन कि अझै पनि मानिसहरु संक्रमित भइरहेका छन् । यतिका समय कोरोनाको कारण थलो परेको अवस्था छ । अझै पनि मानिस त्रसित छन् । सहज परिस्थिति आउनै सकिरहेको छैन । त्यसैले राज्य स्तरबाटै यस सिजनका सबै मेला, भेला महोत्सवलाई सकेसम्म सामाजिक दुरी कायम गरी सुरक्षित ढङ्गबाट संचालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
यस्तो विसम परिस्थितिको कारण सुचारु हुन नसकेको भेला महोत्सवको जिम्मा कसले लिनु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा हाम्रो मुलुकको कारण नभई संसार नै ‘कोभिड १९’ बाट थिला थिला परिरहको छ । जसबाट हाम्रो मुलुक पनि अछुतो हुन सकिरहैको छैन । यस्तो जोखिम परिस्थितिमा मन्छेहरुले आफ्नो दैनिकी सुचारु गर्न निकै हम्मेहम्मे परेको समयमा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम प्रति चासो देखाउने त कुरै भएन । जिनतिन मानिसहरु आफुलाई सुरक्षित राख्दैे दैनिकी बढो कष्ट गरी गुजारी रहेको स्थितिलाई केही मलम लगाउने अवधारणा राज्यबाटै गरिनु पर्छ । तपाईं देख्नु हुन्छ कृषकहरुको उत्पादक वस्तुहरु कला, संस्कृतिका पहिचानका वस्तुहरु जिर्ण भएको स्थिति छ । कृषकहरुले आफ्नो उत्पादकजन्य वस्तुको बजार व्यवस्तापन हुन नसक्दा सिप मुलक सामाग्रीे निर्यात नहुँदा धेरै घाटा व्यहोर्नु परेको छ । त्यसैले यस्ता किसिमका जटिल कुराहरुलाई राज्यस्तरका निकायबाट सम्बोधन हुन जसरी छ । जसबाट थोरे मात्रामा भएपनि यस्ता उत्पादकहरु सीपमुलक राष्ट्रिय पहिचान र आत्मनिर्भरका कुराहरुलाई राहत मिल्न सकोस् ।
यी यस्ता भेला महोत्सवलाई राष्ट्रस्तरका निकायहरुले कसरि लिने गरेको पाउनु भएको छ ?
यो एक टोल, छिमेक आफ्नो समुदायमा केन्द्रित जहाँ राष्ट्रकै पहिचान लुकेका थिए । एक पछि अर्को गर्दे जब समुदायमा फैलदै गर्दा मानिसहरुले एक संस्कार, संस्कृति भित्र पनि मनोरञ्जनलाई लिन थाले । विस्तारै यस्ता कृयाकलाप आधुनिकता तिर मोडिन थालो । मेला, महोत्सव र हाटबजारमा कला, संस्कृति, सीप, प्रवद्र्धन प्रति मानिसहरुलाई धेरै भन्दा धेरै आकर्षित ग¥यो । अहिले पनि हाट बजारको चलन छँदैछ । जहाँ हप्ता, महिनामा लाग्ने गर्छ र आफ्नो स्थानीय स्तरमा उत्पादन र उपलब्ध हुने बस्तुलाई हाटबजारमा बिक्रिबितरणको उचित स्थान मानिन्छ । यसैको फलस्वरुप राज्यले पनि आत्मनिर्भर कसरी हुन÷बन्न सकिन्छ र आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको पहिचान गर्न सहज हुने गर्छ यस्ता महोत्सवहरुले ।
तपाईं पनि ठूला, ठूला महोत्सवहरुमा निकै नै रुचाइएको कलाकारमा पर्नु हुन्छ । कलाकारहरुलाई बोलाउनुको कारण ?
प्रायः त यस्ता किसिमका आयोजनाको उद्देश्य भनेको आफ्नो क्षेत्रको कला, संस्कृति, मौलिक पहिचान भेषभुषा, कृषि उत्पादनहरुलाई आमरुपमा प्रदर्शन गर्नु नै हो । त्यो माहोल बनाउनको लागि राष्ट्रियस्तरका कलाकारहरुलाई प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । कलाकार आउने भएपछि मानिसको उपस्थिति बढी नै हुन्छ । जसले गर्दा धेरै भन्दा धेरै मानिसले त्यस ठाउको बारेमा बुझ्ने मौका पाउँछन् । त्यसैले यस्ता किसिमका आयोजनले व्यापार, व्यवसायलाई पनि टेवा पुग्ने गर्छ अर्को कुरा आफूले रुचाइएका कलाकारलाई नजिकबाट नियाल्न पाइने भएकोले पनि मलाई यस्ता किसिमका भेला, महोत्सवहरुमा बोलाउने गरिन्छ । दर्शकहरुको माग र आयोजकहरुको निमन्त्रणालाई आफ्नो अत्यन्त व्यस्त समयलाई सकेसम्म मिलाएर जाने गरेको छु । जसबाट कलाकारले आर्थिक रुपमा पनि राम्रो आमदानी गर्छन् र नजिकबाट दर्शकको प्रतिक्रिया सुन्न पाउँदा खुशी महसुस हुन्छ ।
शीतलको स्वरमा ‘कसले रोक्यो मेरो हुनमा’ (भिडियोसहित)
पाल्पा : दिपेश परियारको ‘कसले रोक्यो मेरो हुनमा’ लोक गीत पुनः नयाँ स्वरमा बजारमा आएको छ । युवा गायक शीतल लामिछानेको स्वरमा ‘कसले रोक्यो मेरो हुनमा’ गीत पुनः बजारमा आएको हो । कमल भट्टराईको शब्द तथा लोक दुनियाको साथी प्रेम लामिछाने मगरको संगीत रहेको उक्त गीतको भिडियो सावजनिक गरिएको हो ।
गीतलाई पदम बीसीले एरेञ्ज गरेका हुन् । गोविन्द ओलीले रेकर्ड गरेको यस गीतलाई सञ्जय श्रीपालले मिक्सिङरमास्टरिङ गरेका हुन् । सार्वजनिक गीतको भिडियोमा जुना गुरुङ र प्रेम लामिछाने फिचर्ड छन् । काजी श्रेष्ठको निर्देशनमा तयार पारिएको गीतको भिडियोलाई राजेश घिमिरेले छायाङ्कन तथा दीपक विष्टले सम्पादन गरेका हुन् ।
अब आउने मेरो गीतको भिडियोमा सुहाउँदो कथा समावेश हुने छ : शुसिला गौतम (अन्तर्वार्ता)
शुसिला गौतमका तीन दर्जन भन्दा बडी गीत सार्वजनिक भैसकेका छन् भने ती गीतहरु मध्ये अधिकांश चर्चित र लोकप्रिय मानिन्छ । लोक दोहरीको क्षेत्रमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेकी गायिका शुसिलाले आफ्नो गीतमा मोडलिङ पनि गर्छिन् । गुल्मी शान्तिपुरकी बासिन्दा हाल बुटवलमा बसेर आगामी दिनमा कस्ता खाले गीतसंगीत लिएर स्रोता, दर्शकमाझ प्रस्तुत हुने भन्ने सोचमा रहेकी छन् । गायनबाट अभिनयमा प्रवेश गरेकी शुसिलाले आफ्नो बाहेक अन्य विभिन्न चर्चित गीतमा मोडलिङ समेत गरेकी छन् । शुसिला आफ्नो सिर्जनालाई सुन्दर बनाउन शब्द संकलन, संगीत सिर्जनामा पनि स्वयंलाई सकृय बनाउँदै छिन् । एक दशकदेखि दोहरी क्षेत्रमा आफ्नो पृथक पहिचान बनाउँदै गरेकी गायिका शुसिला गौतमले मध्यान्ह दैनिकका लागि सानु श्रेष्ठसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
भौतिक शरीर सन्चो भएपनि मन सन्चो छैन । कोराना भाइरसका कारण झण्डै वर्षदिन घरमा नै पट्यार लाग्दो दिनहरु काटिरहेकी छु । यो अवधिमा त केही सिर्जनाहरु बाहिर आउँथे होला ।
सिर्जनाका लागि त उपयुक्त समय हो नि ?
प्रतिस्पर्धाको जमना छ अरुको भन्दा केही फरक त हुनै पर्छ भन्ने मान्यताका कारण राम्रो सिर्जनाको आशमा सोचनी काम भैरहेको छ । तर, अझै माहोल बनिसकेको छैन । गीत बनाएरमात्र भएन भिडियो चाहियो । होडबाजीको समय छ राम्रै बनाउनु प¥यो राम्रो बनाउँदा खर्च पनि राम्रै हुन्छ । सुन्ने गीतको भन्दा पनि हेर्ने गीतको चलनका कारण गीत तयार पारेर स्रोता, दर्शकसम्म पु¥याउँदा आर्थिकरुपले अलि गाह्रो हुन थालेको छ ।
कस्तो खालको भाका ल्याउने बिचार गर्नुभएको छ ?
भाका त दोहरी नै हो । तर, भिन्न खालको स्वाद दर्शक, स्रोतालाई दिऊँ भन्ने सोच बनाको छु यो पटक ।
प्रायः भिडियोमा केटा, केटी टहलिने वा नाच्ने हुन्छ । मेरो अब आउने भिडियो अलि पृथक हुनेछ । गीत, संगीतको पाटो त छँदैछ भिडियो भित्र गीत सुहाउँदो कथा समावेश हुने छ जसले हेर्ने र सुन्नेलाई छुट्टै आनन्द दिलाउनेछ ।
चलेको गायिका यत्तिका समय हराउँदा कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको छ ?
आफ्ना स्रोताहरुले खोजी गर्नु त खुशीकै कुरा हो । चहाँदा चहाँदै पनि काम गर्ने वातावरण अझै सहज बनिसकेको छैन । स्टेज प्रोगामहरु सून्य जस्तै छ । हामी कलाकारको आर्थिकरुपले ठूलो स्रोत भनेकै स्टेज कार्यक्रम र विदेशमा हुने प्रोगाम हो, दुबै नभएपछि के हुन्छ । शुभचिन्तक स्रोताहरुले सोधिरहनु हुन्छ तपाईंको नयाँ सिर्जना कहिले आउँछ भनेर । छिट्टै आउँछ भन्ने गरेको छु ।
यात्रा लामै भयो गीत, संगीतमा ?
भर्खर जस्तो लाग्छ । तर, एक दशक नै नागि सक्यो । समय वितेकै पत्तै नहुने ।
मोडलिङ गरेको पनि देखिन्छ कत्तिको नाच्नु हुन्छ ?
खासै नाच्न त आउँदैन । अर्को कुरा गाउँले चेली भएर पनि नाच्न जानिएन भने त लाजमर्दो हुन्छ कि ।
दोहरीमात्र गाउनु हुन्छ कि अरु पनि.. ?
गाउन त अरु भाकाका गीत पनि गाउँछु । तर, लोकदोहोरी गीत नै बढी गाउन मन लाग्छ ।
विशेष गरी दोहरी क्षेत्रमा विकृति बढ्यो भन्छन् नि ?
बास्तविक शब्दलाई बिगारेर दर्शकलाई मनोरञ्जन दिने प्रयास गरिन्थ्यो र छाडा लाग्थ्यो अहिले त्यस्तो हुँदैन । आफ्नो मौलिक शैलीमा नै प्रस्तुत हुनु पर्ने कुरा गायक, गायिकाले बुझिसक्नु भएको छ । स्टेज प्रोगामहरुमा कलाकारहरु आफ्नो प्रस्तुति दिनेक्रममा भल्गर्स शब्द र दृश्यले अडेन्सलाई विकृति लाग्नु स्वभाविक हो । क्षणिक मनोरञ्जनका लागि त्यसो गरिनु हुँदैन ।
कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुुन्छ ?
यो क्षेत्रमा गर्नु पर्ने धेरै बाँकी भएपनि अहिले आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट नै छु ।
मोफसलमा बस्नुहुन्छ, काम गर्न कत्तिको सहज हुन्छ ?
सिर्जना भन्ने कुरा जहाँ बसेर गरेपनि उस्तै हो । तर, त्यो सिर्जनाको फिन्सिङ चाहिँ केन्द्रमा नपुगी हुँदैन । किन कि मोफसलमा भनेको जस्तो रेकर्डिङ स्टुडियो बनिसकेको छैन । काठमाडौं नै बस्ने भएपनि लकडाउन यता म बुटवल बसेर गीतसंगीतको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । जतिसुकै राम्रो सिर्जना भएपनि त्यसले मागेको बाजाहरु प्रयोग गर्न राजधानी नै पुग्नु पर्ने बाध्यता छ ।
सुदन खत्रीको शब्दमा रचनाको स्वर रहेको 'धोका' सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं : गायिका रचना रिमालको स्वरमा नयाँ गीत 'धोका' सार्वजनिक भएको छ । सुदन खत्रीको शब्द रहेको गीत टीडीके इन्टरटेनमेन्ट नामक युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक भएको हो ।
राजेन्द्र पाण्डेको छायांकन रहेको उक्त गीतको भिडियोलाई वान वर्ल्ड प्रोडक्सनले बजारमा ल्याएको हो । उक्त गीत बी-माइनर रेकर्डिङमा रेकर्ड गरिएको हो ।
तिलक कट्टेलको म्युजिक संयोजन रहेको उक्त गीतलाई सुमन केसीले एरेन्ज गरेका हुन् ।
हेर्नुहोस् गीतको भिडियो :
'हातमा उन्कै नाउ छ' लोक दोहोरी गीत बजारमा (भिडियोसहित)
म्याग्दी : 'मन्दिरमा धाउँछु बिन्ती कोटी कोटी, हाम्रो भेट बनाई देउन महिनामा चार चोटी, गुराँस फुल्दा रातै तोरी फुल्दा पहेँलै, हातमा उन्कै नाउ छ ए भेट्न मन लाउँछ हितैको मायालाई' बोलको लोक तथा दोहोरी गीत लिएर म्याग्दीका युवा गायक तथा सर्जक बाबुराम रसाइली सांगितिक बजारमा आएका छन् ।
एल्बमलाई 'हातमा उन्कै नाउ छ' नामाकरण गरेका छन् । बाबा इन्टरटेनमेन्ट टिभी नामक युट्युब च्यानलमार्फत गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो ।
आफ्नी प्रेमिकासँग भेट्न जहिल्यै समय मिल्नु पर्दछ भन्ने भाव गीतले बोकेको छ । सुन्दर शैलीमा प्रस्तुत गरिएको गीतका रचनाकार रसाईली स्वयं हुन् भने ती सुन्दर शब्दमा जादुमयी आवाज चर्चित गायिका रिना केसीले भरेकी छिन् । कोरस आवाज समीर रामराम र दिलु फगामी मगरको रहेको छ । चर्चित निर्देशक अमर सुनारले कलात्मक रूपमा गीतलाई पर्दामा उतारेका छन् ।
तारानाथ आचार्यले संगीत संयोजन गरेको गीतमा रविना भण्डारी, सज्जन बोहोरा र शरद एल्जीको नृत्य हेर्न सकिन्छ । समिर रामदामले सम्पादन गरेको भिडियो हरिस महराले खिचेका हुन् भने बाबा ईन्टरटेन्टमेन्ट टिभीले पोस्ट प्रोडक्सन गरेको हो ।
सिने क्षेत्रको अनुभवले शलुन खोलेको हुँ : बरिष्ठ श्रृंगारकर्मी बराल
दुई दशक अघि निर्माण भएको नेपाली चलचित्र ‘हत्या’बाट श्रृंगार कलाकारको रुपमा प्रवेश गरेका श्याम कुमार बरालले अहिलेसम्म चार दर्जन बडी चलचित्रमा काम गरिसकेका छन् । धनुषा, मिथिला नपा १०, का स्थानीय वासिन्दा श्याम कुमार बरालले लहना, दुई किनारा, परेली, फुल, नाई न भन्नु ल, छड्के, मुखौटा लगायतका चलचित्रमा काम गरिसकेका छन् । दि वाउन्स हेयर एण्ड ब्युटि शलुनका सञ्चालक, नेपाल प्राबिधिक संघका सचिव, चलचित्र श्रृंगार संघका अध्यक्ष समेत रहिसक्नु भएका उनले ‘नेफ्टा अवार्ड २०६६’, ‘श्री ५ वीरेन्द्र शाहको गद्दिओरहण, रजत जयन्ती २०५३’ प्रमाणपत्र, ‘फेशन शो २०५४’ प्रमाणपत्र, ‘ फेशन शो २०५५’ प्रमाणपत्र, ‘नेपाल चलचित्र कलाकार संघ २०५६’ प्रमाणपत्र, ‘ब्राईडल मेकअप कम्पिटिशन २०७५’ निर्णायकको भुमिका निर्वाह गरेवापत प्रमाणपत्र, सहयोगि संस्थाव्दारा सम्मानपत्र लगायतका सम्मानबाट सम्मानित भैसकेका छन् । अहिलेका ब्यस्त श्रृंगार कलाकार मध्येका बराल निर्माता, निर्देशकको पहिलो रोजाइका श्रृंगार कलाकार हुन् । चलचित्रकर्मी र आम रुपमा श्याम बरालको नामबाट परिचित श्याम कुमार बरालले मध्यान्ह दैनिकका लागि सानु श्रेष्ठसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
दि वाउन्स हेयर एण्ड ब्युटि शलुनका सञ्चालक हुनुहुन्छ कस्तो खालको ग्राहक आउँछन् ?
धेरै समय चलचित्र क्षेत्रमा काम गरियो । अनुभव पनि भएकोले शलुन खोलेको हुँ । महिला, पुरुष दुबैको लागि आवश्यक सेवाका लागि हामी कहाँ दक्षजनशक्ति रहेको र सेवाग्राहीको कुरा गर्नुपर्दा कपाल कटिङ, कलरिङ गर्ने देखि विभिन्न खाले सेवाका लागि आउनु हुन्छ । हामी कहाँ आउनु हुने जतिपनि हुनुहुन्छ उहाँहरु हाम्रो कामबाट सन्तुष्ट भएर जानुभएकोमा खुशी लाग्छ ।
मानिसहरु कस्तो खालको उपचारको लागि शैलुन वा पार्लर जान्छन् ?
पार्लरमा खासगरी अनुहार र कपालको सौन्दर्यताका लागि नै जाने हुन् । पहिले जस्तो छैन, अहिले त महिलामात्र नभएर पुरुष पनि पार्लर जाने गरेका छन् । म सिनेमामा मेकअप गर्ने ब्यक्ति हुँ । प्राकृतिक सौन्दर्य सामग्रीको राम्रो ज्ञान छ । मलाई लाग्छ छाला र कपाललाई मात्र राम्रो पार्ने होईन, शरिर भित्र देखि नै स्वस्थ हुनुपर्छ ।
सौन्दर्य सामाग्रीको कत्तिको ध्यान दिनु पर्छ ?
मेकअप प्रडक्टको गुणस्तरमा ध्यान दिनु अतिआवश्यक हुन्छ । मेकअप प्रडक्ट खरिद गर्नुपूर्व कुन कम्पनिको प्रडक्ट राम्रो हुन्छ बुझ्नु जरुरी छ । सस्ता सामग्रीले स्वस्थ्य र सौन्दर्य दुबैलाई क्षति पुर्‍याउँछ ।
छाला अनुसारको श्रृंगार गर्नु पर्छ भन्छन् नि ?
हो, स्किनअनुसारको मेकअप प्रडक्ट प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले मेकअप गर्नुपूर्व आफ्नो स्किन कस्तो प्रकृतिको छ भनेर जाँच गर्न जरुरी हुन्छ । आयली र ड्राई स्किनका लागि छुट्टाछुट्टै प्रडक्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । मेकअप प्रडक्ट लामो समयसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, यस्ता प्रडक्ट आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले यसको एक्सपायर डेटबारे पनि राम्ररी जानकार भएरमात्र खरिद गर्न आवश्यक हुन्छ । किनकि स्किनसँग खेलबाड गर्नुहुँदैन ।
सौन्दर्य व्यवसायको अवस्था कस्तो देख्नु हुन्छ ?
अहिले यो ब्यवसायमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था छ । बिगतको दाँजोमा पार्लर वा शलुन खुल्ने क्रम पनि बढेको छ । पार्लरको संख्यासंगै प्रयोगकर्ता पनि उतिकै बढिरहेको छ । सरसर्ति हेर्दा यो राम्रो पक्ष हो ।
हामी कहाँ क्वालिटीको सौन्दर्य सामग्री पाईन्न भन्छन्, शलुनमा गरिने र सुटिङमा गरिने श्रृंगारमा के भिन्नता छ ?
हामी कहाँ सौन्दर्य सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनि छैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनिबाट उत्पादित मेकअपसंग सम्बन्धि, कस्मेटिक सामग्री मात्र प्रयोग गर्दा राम्रो । तर, कुन राम्रो हो पहिचान गर्न सक्नु पर्छ । शलुनमा हुने श्रृंगार र सुटिङमा गरिने श्रृंगार कलामा फरक हुन्छ ।
चलचित्रमा पात्रको भुमिका अनुसारको श्रृंगार गर्नु पर्छ भने शलुनमा ब्यक्तिको चाहनामा भरपर्छ ।
माघ महिना जाडोको महिना, यो अवस्थामा कस्तो मेकअप सामग्री प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ ?
कतिपय मानिसले जाडो र गर्मीमा एकै प्रकृतिको मेकअप सामग्री प्रयोग गर्छन् । तर, यसो गर्दा छालामा प्रभावकारी प्रतिक्रिया नदेखिन सक्छ । जाडोमा छाला सुक्खा भएको हुन्छ भने गर्मीमा चिल्लो । जाडोमा मोस्चराइजरको बढी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्मीमा चाहिँ मोस्चराइजरको प्रयोग गरिँदैन । बरु स्किन टोनर प्रयोग गर्नुपर्छ । जाडो र गर्मी मौसमकै लागि भनेर छुट्टाछुट्टै खालका प्रडक्ट उपलब्ध छ, आफुलाई मनपर्ने प्रडक्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
गायक कमल भट्टराईको ‘जे गरे नि चल्छ नेपालमा’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
पाल्पा : कमल भट्टराई र ममता कोइरालाको देशभक्ती गीत ‘जे गरे नि चल्छ नेपालमा’ बजारमा आएको छ । देशको समसामायिक अवस्थालाई चित्रण गरिएको गीतमा नेताहरुको कार्य शैली, देशले भोग्नु परेको समस्या र जनताका पीडालाई दर्शाइएको छ ।
कमल भट्टराईको शब्द र संगीत रहेको गीतको भिडियो पाल्पामा छायांकन गरिएको हो । गायक स्वयं भट्टराई र गायिका ममताका अलावा भिडियोमा आयाम कार्की, सोम आले, लेखनाथ ढकाल लगायतका कलाकारलाई देख्न सकिन्छ ।
धेरैजसो माया प्रेममा आधारित गीत मात्र बजारमा आइरहेको अवस्थामा फरक शैलीको देशभक्ती गीत दर्शकसामू ल्याउँदा आफुलाई धेरै खुसी लागेको र गीतले सचेतनात्मक सन्देश दिने गायिका कोइरालाले बताइन् । माया प्रेम केन्द्रित गीत भन्दा देशभक्ती र जनताका गीत गाउँदा फरक अनुभव र सन्तुष्टि मिल्ने उनको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि गीत संगीतको क्षेत्रमा क्रियाशिल भट्टराईले देशको अहिलेको अवस्थाले युवा पुस्तामा नकारात्मक असर पुगेकोले आफुहरुले फरक शैलीको गीत प्रस्तुत गरेको मध्यान्ह दैनिकलाई बताए । व्यवसायिक गीतले केवल मनोरञ्जन मात्र दिने तर देशभक्ती गीतले सन्देश दिने भएकाले आफुहरुले देशभक्ती गीत बजारमा ल्याएको बताए ।
गायक भट्टराई र गायिका कोइरालाले यसअघि पनि पाल्पा-बुटवल सडकका कारण भोग्नु परेको समस्या र त्यस क्षेत्रका जनताले भोग्नु परेको धन जनको क्षतीका बारेमा गीत बजारमा ल्याइसकेका छन् । यस गीतले पनी आफुहरु धेरै आशावादी रहेको उनीहरु बताउँछन् ।
गीतको भिडियोलाई आयाम कार्कीले निर्देशन गरेका छन् भने सन्तोष बस्यालको छायांकन/सम्पादन रहेको छ । ईन्द्र जिसीको संगीत संयोजन रहेको गीतको भिडियोलाई आर एम एफ क्रियशनले निर्माण गरेको हो । भर्खरै सार्वजनिक भएको गीतको भिडियोलाई धिताल फिल्मसले बजारमा ल्याएको हो ।